मान,पदबी,पदक र हाम्रो भ्रम -
मान,पदबी,पदक र हाम्रो भ्रम
४ आश्विन २०७८, सोमबार ०९:३९
शसश्त्र प्रहरी बल पुर्व वरीष्ट उपरीक्षक
मुलुकको समृद्धि र हीत अनि लक्ष्यमा पुर्याउने बागडोर (life line )मानिएको देश को मूल कानुन नेपलको संबीधान ! संबीधान सभाको गठन गरी समावेशी धेरै मेहनत गरीब राज्यको अथाहा बिकासको काम थाती राखेर ठुलो रकम खर्चेर हाम्रो पालामा नेपालको संबीधान -२०७२ बनायौ । त्याहा प्रतिनिधित्व कसरी गराईयो बिदितै छ ।
प्रमुख मुद्दा हरुमा जनमत संग्रहको नाम सम्म पनि लिन आबश्यक ठानिएन । बिशाल जनप्रद्शन र जनआंदोलन को चाहाना र हजारौको बलिदानीको बलमा भनियो ।आम पिडीत उत्पिडनमा पारिएका जनताहरुको मुक्तिको लागी पनि भनिएको थियो । जनताहरु को अधीकारको पूनर्बहाली जनतामा पनि भनिएको थियो । अति राम्रो समर्थन गर्न लायक लोकतंत्रको पुनर्बहाली भएको सम्झी स्वागत र समर्थन गरियो । त्यही संबीधान आज छैटौ बर्ष नपुग्दै संबीधानले परीकल्पना गरेको परीणतिहरु मा कटाक्ष गर्दै छौ ।
यसको धारामा टेकेर गरिएको कर्महरु लाई अस्विकार अनि घृणा अलापदै छौ । अक्षय प्रश्न याहा निर छ ।
रास्ट्रपति बाट दीईने तक्मा पुरस्कारको शिफारीस साबीक मन्त्री परीषद, गृह मंत्रालय र प्रमुख जील्ला अधीकारी र सुरक्षा फौजमा प्रमुखको संयोजक बाट बनाईएको समितीको सिफ़ारिशमा भनिएको छ ।
यी सबै निकायहरु स्वतंत्र र सक्षमा छैनन भनेर बुझ्दा बुझ्दै पनि बुझ पचाउछौ कि यी नामवली हरु यो यो आधारबाट छनौट गरीयो चित्त नबुझे जबाफ देही हुनेछु भन्ने ब्यबस्था नै छैन । केवल माथीको आदेश को पछील्लो अपडेट छुट्ला र मेरो जागीर धरापमा पर्ला भन्ने स्मरण गरे मात्र वाहा हरु अनुमोदन गर्नेहरुको खैरियत छैन ।
अब त समितिले शिफारिस नगरि पनि तक्मा पाईएको समाचार आयो बिशेस योगदान गर्ने हरु लाई सम्मान हुने भयो सजीलो तरिका बाट । उता आखिर प्र म ज्यू मा सबै बिबेक र न्याय होला भनौ त वाहा झनै कठिन परीस्थितीबाट गुज्रन, घस्रिन, पाईला पाईलामा अपमानित हुन बाध्य हुनुहुन्छ ।
आफ्नो हैन फरक बिचार का स्वार्थी झुन्डहरुको कालो अरिंगाल जस्तै पोको बाट बनेको अपबीत्र गठबन्धन ! न सिद्धांत न आदर्श न मुलुकको समृद्धि मा बनाईएको खाका मा सहमति ? केवल पद र अबसर हरुको समान बितरण गरिनु पर्ने शर्तमा रास्ट्र घाती कदम रोक्न भनिएको संबीधान बिरोधी,संबीधानको गला घोट्ने, प्रतिगमनको मतियार के . पि . वली सरकार बिरोधी कित्तामा खडा भई योगदान गरेको हरु बाट सहमति बनाई असंतुस्ट हरुको झुन्डको प्रतिबद्धता बोक्ने हरु को समिकरण बाट बन्ने वाला सरकार बाट चारै तिर बाट घेरिएको अबस्था छ ।
आफ्नो पार्टी र कार्यकर्ता त परै जाउन ति त घरकै हुन देखा जाला ! अर्कै पार्टी का दश तिर मुख फर्केका सांसद नेताहरु बाट छनौट गरिनु कति सकस होला ?
कठै रास्ट्र सेवकहरुका प्रमुख हरु कति निर्लज्ज धम्काईए होलान ? यी यतीजनका सिफ़ारिश लाई नसमेटे परीणाम थाहा होला नि ? पछील्लो अपडेट मा तल माथी नपरोस नि पिए हरुको चेतवनी ! हेरौ त कति वटा पार्टि र अध्य़क्ष मात्र हो र सबै जसो नेता को भन्दा को कम छन धम्की हप्की कति खानु पर्यो होला ? हाम्रो देशको सर्बोपरी पदमा रहेका कार्यकारी प्रमुख सम्मानिय प्र म ज्यू लाई । यस पट्टी कहीले सम्म हामि बुझेर पनि अबुझ बन्ने उदेक लाग्नु छ त्यही पद हत्याउन दोहोरिन तेहीरिन ईच्छुक नेताहरु को रहर रहश्यमय बन्दैछ ।
हीजोका दिनमा ठुलो भूल हामि गरी सक्याछौ त्यो थियो यस्तै मुलुकको हितमा भन्दा आफ्नो दल, आफ्नो गुट र आफ्नो मानिसको हीत हुने गरी जनताहरुको नाममा टेबुल ठट्याएर बिदशी शक्ति केन्द्र हरुको ईसारामा यो रास्ट्रको एकताको प्रतिक, यो रास्ट्रको पहीचान समाप्त पार्दा रात भरी मैन बत्ति बालेर पार्टी खाएको खुसीयाली मनाएको पनि हामि हौ भुल्न भएन नि । अनि वाहा हरु ले चाहेको गर्ने छुट दिने पनि समर्थन मा लेख अन्तरबार्तादिन् बुद्धिजीवी पत्रकार पनि हामि नै हौ । फ़ेसबुक मा सगैरब स्टाटस लेख्ने पनि हामि मध्ये ऐले अलाप र कटाक्ष गर्ने हरु पनि हामि नै हो । पदकमा धाधली देख्ने बेईमानी देख्ने आफ्नो नपरे पछी, नपाए पछी यस्तै हुदोरैछ स्वभाबिक होला ।
हीजो के पि ले एक्लै खायो हामि लाई गनेन प्रतिगमन भयो किन भन्या रहेछ बुझेर पनि बुझ नपचाऔ कि ?
कम्सेकम के पि को पालामा मुलुकको समृद्धि र हितको सपनाहरु सुन्न र देख्न पाईएको थियो । खाएको भए पनि एउटैले कति खान्थ्यो पेट भरिन्थ्यो अब कतिको पेट भर्न बाध्यता आई लाग्यो प्र म ज्यू लाई । आज के हुदैछ गठबंधन को चित्त बुझाएर कुर्सीको भागबन्डा मिलाउनै महासकस झनै पद बाडे पछी कति रडाको सुन्न पर्ने हो अनि मन्त्रालय पाए पछीको भाडभालो कल्पना नगरौ न कसैको डर अनुशासन ! आफ्नो भागमा परेको यती दुख गरी पाएको मन्त्रालय र मन्त्री मेरो अधीकार हो मेरो कुरो तल माथी गर्ने तपाईं सचिब / आई जी पि साब बिचार गर्नुस ? अनि जनताको काम भनेको पार्टीमा रहेर पूर्ण कालिन पार्टीको आदेशमा काम गर्ने हरु पो नेपाली जनताहरु हुन र गुनासो पनि जायज होला । पदक वाहा हरुले नपाए कस्ले पाउने यति पनि नबुझ्ने बेला न कुबेला गन गन बन्द गरौ सबै जना त्यस्तो कोटीमा पर्ने भ्रम नपालौ धेरै महानुभाव हरुको क्षमता र प्रतिभा को कदर यस पटकको पदक बाट पक्कै भएको छ ,बधाईतथा शुभकामना वाहा हरुमा ।
यो देशमा पालै पालो शक्ति र सत्ता हत्याउने खेलको सृखला राणा शासन, पन्चायती ब्यबस्था राजा को प्रत्यक्ष शासन, फेरी बहुदल पनि सुधार गरी संघीयता, धर्मनिरपेक्षता सहीतको लोकतान्त्रिक बहुदलिय ब्यबस्था सम्मको यात्रामा हामि यो सुन्दर मुलुकको समृद्धिको सपना देखने काम कहीले सम्म पुरा हुनेछ धैर्यता गर्नु र कुर्नुको बिकल्प देखिएन ।
यीनै चार पाच वटा नेताहरु को वरीपरी सत्ता को बागडोर को फन्को लगाउने पक्का देखियो किनकी नेपाली जनताका प्रतिनिधि यूवा योद्धाहरु आपसमा बिभक्त बनि आआफ्नो पक्षको पक्षपोषण र खबरदारी गर्ने जो जीम्म्बारी सम्मालेकै छन ।
आखिर नेपाल दुनियाको नजरमा सार्वभौमिक,स्वतंत्र, गणतन्त्रात्मक संघीय लोकतांत्रिक मुलुकको पहीचान जो बनाई सकेको अबस्था हो ।
एनआरएनले प्रारम्भ गरेको निर्वाचन प्रक्रिया पूर्णरूपमा धाँधलीपूर्ण तथा संघको विधान, प्रचलित मान्यता, न्यायिक सिद्धान्त विपरित